आज सुनको भाउ बढ्यो, तोलाको कति ? - सिम्रिक खबर
आज सुनको भाउ बढ्यो, तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । सोमबार सुनको मुल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला छापावाला सुन ९७ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ९६ हजार ७०० रुपैयाँ तोकिएको छ । आइतबार सुनको भाउ स्थिर रहेको थियो। भने चाँदीको मूल्य घटेको थियो । सुन हिजो प्रतितोला छापावाल सुन ९७ हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुन ९६ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
गत शुक्रबार सुन तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको थियो । आज चाँदीको भाउ तोलामा ५ रुपैयाँले बढेको छ। योसँगै आज प्रतितोला चाँदीको भाउ १ हजार ३२० रुपैयाँ कायम भएको छ। आइतवार चाँदी १३१५ रुपैयामा कारोबार भएको थियो ।